Nei Mwari Achishandisa Simba Rokuparadza? | Swedera Pedyo
1-3. (a) VaIsraeri vakatyisidzirwa nei nevaIjipiti? (b) Jehovha akarwira vanhu vake sei?
VAISRAERI vakanga vava pakati nepakati—vari pakati pemawere emakomo anotyisa negungwa ravakanga vasingagoni kuyambuka. Uto reIjipiti, raiuraya noutsinye somuchina, rakanga richivadzingirira riine hasha, richida kuvaparadza. * Kunyange zvakadaro, Mosesi akakurudzira vanhu vaMwari kuti vasaora mwoyo. “Jehovha uchakurwirai,” akavavimbisa kudaro.—Eksodho 14:14.
2 Kunyange zvakadaro, Mosesi sezviri pachena akadanidzira kuna Jehovha, uye Mwari akapindura achiti: “Unodanidzireiko kwandiri? . . . Iwe simudza tsvimbo yako, utambanudzire ruoko rwako pamusoro pegungwa, uritsemure napakati.” (Eksodho 14:15, 16) Imbofungidzira hako zvinotanga kuitika ipapo. Jehovha anorayira ngirozi yake nokukurumidza, uye shongwe yegore inofamba ichienda kumashure kwevaIsraeri, zvimwe ichitambanuka sorusvingo uye ichivharira varwi vevaIjipiti. (Eksodho 14:19, 20; Pisarema 105:39) Mosesi anotambanudza ruoko rwake. Richisundwa nemhepo ine simba, gungwa rinotsemuka nepakati. Mvura inomira semasvingo, ichivhura nzira yakafara zvakakwana kuti rudzi rwose rupfuure!—Eksodho 14:21; 15:8.
3 Atarisana nokuratidzwa kwesimba uku, Farao anofanira kurayira mauto ake kuti adzokere. Pane kudaro, Farao nokuzvikudza anorayira kurwisa. (Eksodho 14:23) VaIjipiti vanomhanya vachipinda mugungwa vachidzingirira, asi inopedzisira yava nyonganyonga sezvo mavhiri engoro dzavo anotanga kugurunuka. VaIsraeri vangopona chete uye vava mhiri, Jehovha anorayira Mosesi kuti: “Tambanudzira ruoko rwako pamusoro pegungwa, kuti mvura idzokere pamusoro pavaIjipiti, napamusoro pengoro dzavo, napamusoro pavatasvi vavo vamabhiza.” Masvingo emvura anoputsika, achifukidza Farao nemauto ake!—Eksodho 14:24-28; Pisarema 136:15.
PaGungwa Dzvuku, Jehovha akaratidza kuva “munhu wokurwa”
4. (a) Jehovha akaratidza kuti ndiani paGungwa Dzvuku? (b) Vamwe vanganzwa sei nokuratidzwa kwaJehovha nenzira iyi?
4 Kununurwa kworudzi rwaIsraeri paGungwa Dzvuku chakanga chiri chiitiko chinokosha munhoroondo yokubata kwaJehovha nevanhu. Ipapo Jehovha akaratidza kuva “munhu wokurwa.” (Eksodho 15:3) Zvisinei, unonzwa sei pamusoro pokuratidzwa kwaJehovha uku? Kutaura chokwadi, hondo yakaunza marwadzo akawanda nenhamo kuvanhu. Kungava kuti kushandisa kwaMwari simba rokuparadza kunoratidzika sechimwe chinhu chinokudzivisa pane kukuswededza pedyo naye here?
Hondo yaMwari Nokurwisana Kwevanhu
5, 6. (a) Nei Mwari nenzira yakakodzera achinzi “Jehovha wehondo”? (b) Hondo dzaMwari dzakasiyana sei nehondo dzevanhu?
5 Kanoda kusvika kane mazana matatu muMagwaro echiHebheru uye kaviri muMagwaro echiKristu echiGiriki, Mwari anopiwa zita rokuremekedza rokuti “Jehovha wehondo.” (1 Samueri 1:11) Sezvo ari Changamire Mutongi, Jehovha anorayira uto guru remauto engirozi. (Joshua 5:13-15; 1 Madzimambo 22:19) Simba rokuparadza rine uto iri rinotyisa. (Isaya 37:36) Kufunga nezvokuparadzwa kwevanhu hakufadzi. Zvisinei, tinofanira kuyeuka kuti hondo dzaMwari dzakasiyana nokurwisana kuduku kwevanhu. Vatungamiriri vehondo nevezvematongerwe enyika vangaedza kuti hasha dzavo imhaka yokuvavarira kugadzirisa zvinhu. Asi hondo dzevanhu nguva dzose dzinobatanidza kukara noudyire.
6 Mukupesana, Jehovha haangoiti zvinhu neshungu asingafungi zvemberi. Dheuteronomio 32:4 inozivisa kuti: “Iye ndiro dombo, basa rake rakakwana; nokuti nzira dzake dzose dzakarurama. Ndiye Mwari wakatendeka, usinganyengeri, wakarurama ndowazvokwadi.” Shoko raMwari rinoshora hasha dzisingadzorwi, utsinye, uye chisimba. (Genesi 49:7; Pisarema 11:5) Naizvozvo Jehovha haamboiti chinhu pasina chikonzero. Anoshandisa simba rake rokuparadza zvine mwero uye pasisina imwe nzira. Zvakaita sezvaakataura achishandisa muprofita wake Ezekieri kuti: “Ko ini ndingatongofarira rufu rwowakaipa here?—ndizvo zvinotaura Ishe Jehovha; [handifariri] kudzoka kwake panzira yake, ararame here?”—Ezekieri 18:23.
7, 8. (a) Jobho akaguma afungei pamusoro pokutambura kwake asi zvisiri izvo? (b) Erihu akaruramisa sei kufunga kwaJobho panhau iyi? (c) Chidzidzoi chatingadzidza pane zvakaitika kuna Jobho?
7 Zvino nei Jehovha achishandisa simba rokuparadza? Tisati tapindura, tingayeuka nezvomunhu akarurama Jobho. Satani akaratidza kusava nechokwadi chokuti Jobho—kureva munhu wose—angaramba akaperera here kana kuti kwete kana akaedzwa. Jehovha akapindura nokubvumira Satani kuedza kuperera kwaJobho. Somugumisiro, Jobho akarwara, akarasikirwa nepfuma, uye akafirwa nevana vake. (Jobho 1:1–2:8) Nokusaziva nhau dzaibatanidzwa, Jobho akaguma afunga zvisizvo kuti kutambura kwake kwakanga kuri kurangwa kusina ruramisiro kwaaiitwa naMwari. Akabvunza Mwari kuti nei akanga amuita “chinhu cha[ai]vavarira,” “muvengi.”—Jobho 7:20; 13:24.
8 Mumwe murume wechiduku ainzi Erihu akabudisa pachena kusarurama kwemafungiro aJobho, achiti: “Munoti: Kururama kwangu kunopfuura kwaMwari.” (Jobho 35:2) Hungu, hakusi kuchenjera kufunga kuti tinoziva kupfuura Mwari, kana kuti kufungidzira kuti aita nokusaruramisira. “Mwari haangatongoiti zvisakarurama; Wamasimba Ose haangatongoiti zvakaipa,” akazivisa kudaro Erihu. Pave paya, akazoti: “Kana ari Wamasimba Ose, hatigoni kumunzwisisa; une simba guru-guru; haangatambudzi pakutonga nokururama kukuru.” (Jobho 34:10; 36:22, 23; 37:23) Tinogona kuva nechokwadi chokuti Mwari paanorwa, ane chikonzero chakanaka chokuita kudaro. Tichifunga izvozvo, ngatimboongorora zvimwe zvezvikonzero nei Mwari worugare dzimwe nguva achipfeka nguo dzomurwi.—1 VaKorinde 14:33.
Chikonzero Nei Mwari Worugare Achimanikidzwa Kurwa
9. Nei Mwari worugare achirwa?
9 Arumbidza Mwari so“munhu wokurwa,” Mosesi akazivisa kuti: “Ndianiko wakafanana nemi, Jehovha, pakati pavamwari? Ndianiko wakafanana nemi paukuru hwoutsvene?” (Eksodho 15:11) Muprofita Habhakuki akanyorawo zvakafanana achiti: “Imi, mune meso akaisvonaka, asingadi kutarira zvakaipa, musingadi kuona zvisakarurama.” (Habhakuki 1:13) Kunyange zvazvo Jehovha ari Mwari worudo, ndiMwari woutsvene zvakare, wokururama, uye wokururamisira. Pane dzimwe nguva, unhu uhwu hunomumanikidza kushandisa simba rake rokuparadza. (Isaya 59:15-19; Ruka 18:7) Naizvozvo Mwari haakanganisi utsvene hwake paanorwa. Asi, anorwa nokuti mutsvene.—Eksodho 39:30.
10. (a) Zvakanga zvaita sei kuti Mwari azofanira kutanga kurwa hondo uye zvakaitika rini? (b) Ruvengo rwakafanotaurwa pana Genesi 3:15 rwaigona kugadziriswa nenzira ipi bedzi, uye zvichibatsira sei vanhu vakarurama?
10 Funga nezvemamiriro ezvinhu akamuka apo vanhu vaviri vokutanga, Adhamu naEvha, vakapandukira Mwari. (Genesi 3:1-6) Dai akanga ashivirira kusarurama kwavo, Jehovha aizodai akakanganisa nzvimbo yake saChangamire Wezvisikwa zvose. SaMwari akarurama, aitofanira kuvapa mutongo worufu. (VaRoma 6:23) Muuprofita hweBhaibheri hwokutanga, akafanotaura kuti paizova noruvengo pakati pevashumiri vake nevateveri ve“nyoka,” Satani. (Zvakazarurwa 12:9; Genesi 3:15) Pakupedzisira, ruvengo urwu rwaizogona kungopedzwa nokuparadzwa kwaSatani bedzi. (VaRoma 16:20) Asi chiito chokutonga ichocho chaizoguma nezvikomborero zvikuru nokuda kwevanhu vakarurama, chichibvisa simba raSatani pasi pano uye kuzarura nzira yeparadhiso yenyika yose. (Mateu 19:28) Kusvika panguva iyoyo, avo vakatsigira Satani vaizoramba vachityisidzira vanhu vaMwari muupenyu hwavo nokunamata kwavo. Panhambo nenhambo, Jehovha aifanira kupindira.
Mwari Anoita Chiito Kuti Abvise Uipi
11. Nei Mwari akanzwa ane musengwa wokuunza boporodzi renyika yose?
11 Boporodzi romuzuva raNoa ndomumwe muenzaniso wokupindira kwakadaro. Genesi 6:11, 12 inoti: “Nyika yakanga yakaora pamberi paMwari, nyika yakanga izere nokumanikidzana. Mwari akaona nyika kuti yakaora; nokuti vanhu vose vakanga vaodza mufambiro wavo panyika.” Mwari aizobvumira kuti vakaipa vaodze tsika dzose dzakanaka panyika here? Aiwa. Jehovha akanzwa ane musengwa wokuunza boporodzi kuti abvise panyika vaiva netsika yokuita zvechisimba nounzenza.
12. (a) Jehovha akafanotaura chii pamusoro pe“mbeu” yaAbrahamu? (b) Nei vaAmori vaifanira kuzoparadzwa?
12 Zvakanga zvakafanana nokutongwa kwakaitwa vaKanani naMwari. Jehovha akazivisa kuti kubva kuna Abrahamu kwaizobuda “mbeu” iyo mhuri dzose dzepasi dzaizozvikomborera nayo. Mukuwirirana nechinangwa ichocho, Mwari akazivisa kuti vana vaAbrahamu vaizopiwa nyika yacho yeKanani, nyika yaigarwa nevanhu vainzi vaAmori. Mwari aigona kunzi ari kuita zvakarurama sei nokudzinga vanhu ava panyika yavo? Jehovha akanga afanotaura kuti kubvisa kwacho kwaisazoitwa kwemakore 400 aizotevera—kusvikira “kusarurama kwavaAmori” kwa“zara.” * (Genesi 12:1-3; 13:14, 15; 15:13, 16; 22:18) Panguva iyoyo, vaAmori vakaramba vachinyura mutsika dzakaora. Kanani yakava nyika yokunamata zvidhori, kudeura ropa, nemiitiro younzenza yakaipa kwazvo. (Eksodho 23:24; 34:12, 13; Numeri 33:52) Vagari venyika yacho vaitouraya vana vachivapisira sezvibayiro mumoto. Mwari mutsvene aizosiya vanhu vake vari mungozi yokupinda muuipi hwakadaro here? Aiwa! Akazivisa kuti: “Nyika yakasvibiswa; naizvozvo ndinoirova pamusoro pezvakaipa zvayo, nyika irutse vanhu vageremo.” (Revhitiko 18:21-25) Zvisinei, Jehovha haana kungoparadza vanhu vose. VaKanani vaida kururama, vakadai saRakabhi nevaGibhiyoni havana kuparadzwa.—Joshua 6:25; 9:3-27.
Kurwira Zita Rake
13, 14. (a) Nei Jehovha aifanira kutsvenesa zita rake? (b) Jehovha akabvisa sei kuzvidzwa pazita rake?
13 Nemhaka yokuti Jehovha mutsvene, zita rake idzvene. (Revhitiko 22:32) Jesu akadzidzisa vadzidzi vake kunyengetera vachiti: “Zita renyu ngaritsveneswe.” (Mateu 6:9) Kupanduka kwomuEdheni kwakasvibisa zita raMwari, kuchiparira kusava nechokwadi pamusoro pomukurumbira waMwari nematongere ake. Jehovha aisambogona kurerutsa kuchera nokupandukira kwakadaro. Aitofanira kutsvenesa zita rake pakuzvidzwa.—Isaya 48:11.
14 Funga zvakare nezvevaIsraeri. Chero bedzi vaiva nhapwa muIjipiti, chipikirwa chaMwari kuna Abrahamu chokuti kuburikidza neMbeu yake mhuri dzose dzepasi dzaizozvikomborera chairatidzika sechisina basa. Asi nokuvanunura uye kuvagadza sorudzi, Jehovha akabvisa kuzvidzwa pazita rake. Muprofita Dhanieri nokudaro akayeuka mumunyengetero kuti: “Zvino imi Ishe Mwari wedu, makabudisa vanhu venyu panyika yeIjipiti noruoko rune simba, mukazviwanira mukurumbira.”—Dhanieri 9:15.
15. Nei Jehovha akanunura vaJudha vaiva nhapwa muBhabhironi?
15 Sezvineiwo, Dhanieri akanyengetera nenzira iyi panguva apo vaJudha vaida kuti Jehovha aite chimwe chinhu zvekare nokuda kwezita Rake. VaJudha vakanga vasingateereri vakangokaruka vava nhapwa, panguva ino muBhabhironi. Guta ravo guru, Jerusarema, rakanga rava matongo. Dhanieri aiziva kuti kudzorera vaJudha kunyika yokumusha kwavo kwaizokwidziridza zita raJehovha. Naizvozvo Dhanieri akanyengetera achiti: “Ishe, kanganwirai; Ishe, teererai, muite; regai kunonoka, nokuda kwenyu, imi Mwari wangu, nokuda kweguta renyu navanhu venyu vakatumidzwa zita renyu.”—Dhanieri 9:18, 19.
Kurwira Vanhu Vake
16. Tsanangura kuti nei kufarira kwaJehovha kudzivirira zita rake kusingarevi kuti haana ushamwari uye anongozvifunga.
16 Ko kufarira kwaJehovha kurwira zita rake kunoreva kuti haana ushamwari uye anongozvifunga here? Aiwa, nokuti nokuita maererano noutsvene hwake uye kuda ruramisiro, anodzivirira vanhu vake. Funga nezvechitsauko 14 chaGenesi. Ipapo tinoverenga nezvemadzimambo mana akapinda nechisimba ndokubata Roti, mwana womunun’una waAbrahamu pamwe nemhuri yaRoti. Achibatsirwa naMwari, Abrahamu akakunda zvinoshamisa mauto makuru akakwirira! Nhoroondo yokukurira iyi pamwe ndiyo yokutanga mu“bhuku yeHondo dzaJehovha,” sezviri pachena bhuku iri rakanyorwawo dzimwe hondo dzisina kunyorwa muBhaibheri. (Numeri 21:14) Kumwe kukunda kuzhinji kwaizotevera.
17. Chii chinoratidza kuti Jehovha akarwira vaIsraeri pashure pokupinda kwavo munyika yeKanani? Ipa mienzaniso.
17 Nguva pfupi vaIsraeri vasati vapinda munyika yeKanani, Mosesi akavavimbisa kuti: “Jehovha Mwari wenyu unokutungamirirai, iye uchakurwirai, sezvaakakuitirai zvose pa[Ijipiti] pamberi penyu.” (Dheuteronomio 1:30; 20:1) Kutanga nomutsivi waMosesi, Joshua, uye kupfuurira kusvika kunguva yeVatongi nokutonga kwemadzimambo akatendeka enyika yeJudha, Jehovha zvechokwadi akarwira vanhu vake, achivakundisa vavengi vavo nenzira inoshamisa.—Joshua 10:1-14; Vatongi 4:12-17; 2 Samueri 5:17-21.
18. (a) Nei tichigona kuonga kuti Jehovha haana kuchinja? (b) Chii chichaitika apo ruvengo runorondedzerwa pana Genesi 3:15 runosvika pakakwirira zvikuru?
18 Jehovha haana kuchinja; kunyange nechinangwa chake chokuita kuti pasi pano pave paradhiso ine rugare hachinawo kuchinja. (Genesi 1:27, 28) Mwari achiri kuvenga uipi. Panguva imwe chete, anoda vanhu vake chaizvo uye nokukurumidza achavarwira. (Pisarema 11:7) Kutaura chokwadi, ruvengo runorondedzerwa pana Genesi 3:15 runotarisirwa kukwira kusvika pakuva hondo chaiyo munguva pfupi iri kutevera. Kuti atsvenese zita rake nokudzivirira vanhu vake, Jehovha achava zvakare “munhu wokurwa”!—Zekaria 14:3; Zvakazarurwa 16:14, 16.
19. (a) Ipa muenzaniso wokuti nei kushandisa kwaMwari simba rokuparadza kuchigona kutiswededza pedyo naye. (b) Kuda kurwa kwaMwari kunofanira kutiita kuti tinzwe sei?
19 Funga nezvomuenzaniso uyu: Ngatiti mhuri yomumwe murume iri kurwiswa nechikara uye murume uya ongosvika achiuraya chikara chiya. Waizotarisira mudzimai wake nevana kuti vamutye nemhaka yechiito ichi here? Pane kudaro, ungatovatarisira kuonga zvakadzama kuvada kwake kusina udyire. Saizvozvowo, hatifaniri kutyiswa nokushandisa kwaMwari simba rake rokuparadza. Kuda kwake kutirwira kuti atidzivirire kunofanira kuwedzera kumuda kwedu. Kuremekedza kwedu simba rake guru kwazvo kunofanira kukura zvakare. Nokudaro, tingaitira “Mwari basa dzvene zvinogamuchirika nokumutya nokumuremekedza.”—VaHebheru 12:28.
Swedera Pedyo No“munhu Wehondo”
20. Patinoverenga nhoroondo dziri muBhaibheri dzehondo dzaMwari dzatingatadza kunyatsonzwisisa, tinofanira kunzwa sei, uye nei?
20 Chokwadi, Bhaibheri haritsananguri mashoko ose akazara pamusoro pezvisarudzo zvaJehovha zvokuti arwe. Asi nguva dzose tinogona kuva nechokwadi chokuti: Jehovha haamboshandisi simba rokuparadza nenzira isina ruramisiro, pasina chikonzero, kana kuti nenzira youtsinye. Kazhinji, kufunga nezvemashoko akapoteredza nyaya yomuBhaibheri kana kuti mamwe mashoko okuwedzera zvinogona kutibatsira kufunga nomazvo. (Zvirevo 18:13) Kunyange apo tinenge tisina mashoko akazara, kungodzidza zvakawanda nezvaJehovha nokufungisisa nezvounhu hwake hunokosha kunogona kutibatsira kugadzirisa chero kusava nechokwadi kupi kungamuka. Patinodaro, tinosvika pakuona kuti tine zvikonzero zvakawanda zvokuvimba naMwari wedu, Jehovha—Jobho 34:12.
21. Kunyange zvazvo ari “munhu wokurwa” pane dzimwe nguva, Jehovha akaita sei mumwoyo make?
21 Kunyange zvazvo Jehovha ari “munhu wokurwa” apo zvinoda kuti adaro, izvi hazvirevi kuti mumwoyo make anofarira hondo. Pane zvakaratidzwa Ezekieri achiona ngoro yehondo yokudenga, Jehovha anoratidzwa seakagadzirira kurwa nevavengi vake. Asi, Ezekieri akaona Mwari akakomberedzwa nomuraraungu—chiratidzo chorugare. (Genesi 9:13; Ezekieri 1:28; Zvakazarurwa 4:3) Sezviri pachena, Jehovha akadzikama uye anoda rugare. “Mwari rudo,” akanyora kudaro muapostora Johani. (1 Johani 4:8) Zvinhu zvose zvine mwero wakakodzera muunhu hwaJehovha. Naizvozvo tine ropafadzo kwazvo, kukwanisa kuswedera pedyo naMwari ane simba zvakadaro asi ane rudo!
^ ndima 1 Maererano nomunyori wenhau dzakaitika wechiJudha Josephus, vaHebheru “vakadzinganiswa nengoro dzehondo 600 pamwe chete nevatasvi vemabhiza 50 000 uye varwi vaifamba netsoka vakagukuchira zvombo vanosvika 200 000.”—Jewish Antiquities, II, 324 [xv, 3].
^ ndima 12 Sezviri pachena, shoko rokuti “vaAmori” pano rinobatanidza marudzi ose eKanani.—Dheuteronomio 1:6-8, 19-21, 27; Joshua 24:15, 18.
2 Madzimambo 6:8-17 Ko kushanda kwaMwari sa“Jehovha wehondo” kungava kunokurudzira sei kwatiri panguva yenhamo?
Ezekieri 33:10-20 Asati ashandisa simba rokuparadza, Jehovha anopa mukana wei nenzira yetsitsi kune vanodarika mutemo wake?
2 VaTesaronika 1:6-10 Ko kuparadzwa kwevanhu vakaipa kuchaitika kuchazorodza sei vashumiri vakatendeka vaMwari?
2 Petro 2:4-13 Chii chinoita kuti Jehovha ashandise simba rake rokuparadza, zvichipa chidzidzo chei kuvanhu vose?